राशिफलमा यस्तो लेखेको छ आज तपाईंको भाग्य – Pahilo Page
राशिफलमा यस्तो लेखेको छ आज तपाईंको भाग्य
७ आश्विन २०७७, बुधबार ११:१२ 450 पटक हेरिएको
वि. सं. २०७७ असोज ७ बुधवार । आश्विन शुक्लपक्ष । सप्तमी, २५ः१३ उप्रान्त अष्टमी ।
काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ । अस्वस्थताले आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ । अप्रिय समाचारले मन खिन्न बनाउला । अध्ययनमा पछि परिनेछ भने व्यापारमा सोचेको फाइदा नउठ्ने देखिन्छ । नयाँ योजना प्रारम्भ गर्न उपयुक्त साइत पर्खनुहोला । नतिजा सच्याउन काम दोहोराउनु पर्ला । लगनशील भएर प्रयत्न गर्दा बिस्तारै अवरोध हट्न सक्छ ।
सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता आउनेछ । छोटो समयमा मनग्गे फाइदा हुनेछ । विशेष उपहार प्राप्त हुनसक्छ । परिवारजनको साथले उत्साह जगाउनेछ । मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिनेछ भने अतिथिको रूपमा सत्कार प्राप्त हुने समय छ । व्यापारको बहानामा रमाइलो यात्रा हुनसक्छ । आम्दानी राम्रो भए पनि सुविधाका लागि खर्च बढ्न सक्छ ।
चुनौती पन्छाएर काम बनाउन सकिनेछ । केही दौडधुप गर्नु परे पनि पराक्रमद्वारा अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ । दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ । मिहिनेतले प्रतिस्पर्धाको दौडसमेत जिताउन सक्छ तर द्वेष तथा इष्र्या गर्नेहरूले सताउन सक्छन् । अरूको वचन हार्न नसक्दा दुःख पाइनेछ र खर्च पनि हुनेछ । परिबन्दले अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ ।
दिगो काम प्रारम्भ गर्ने समय छ । तारिफयोग्य काम गर्दै धेरैको उपकार गर्न सकिनेछ । विशेष अध्ययन तथा नयाँ ज्ञानको खोजीमा समय बित्नेछ । गुरुजनको सहयोगले बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा अग्रस्थान हासिल गर्न सफल भइनेछ । रोकिएका काम बन्नाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ । स्वास्थ्यमा भने केही कमजोरी रहनेछ । मिहिनेतले राम्रो प्रतिफल दिलाउनेछ ।
बेसुरमा बोल्ने बानीले दुःख पाइनेछ । विशेष योजना सार्वजनिक नगर्नुहोला । काम बिग्रने डरले सताउनेछ । साझेदारीमा समस्या आउनाले पहिलेको सम्झौता भंग हुन सक्छ । अरूको व्यवहारले शंका उब्जाए पनि मान्यजनको सुझाव शिरोधार्य गर्दा फाइदा हुनेछ । दिगो योजनामा अघि बढ्दा लाभ मिल्नेछ । तत्कालको सामान्य फाइदा हेर्दा पछिलाई घाटा हुन सक्छ ।
केही संघर्ष गर्नुपरे पनि राम्रो फाइदा उठाउन सकिनेछ । कृषिकर्म र व्यावसायिक काममा मनग्गे लाभ हुनेछ । उद्योग र व्यापारमा सामान्य लाभ उठाउन सकिनेछ । सहयोगीहरूले हात झिक्नाले केही समस्या भने बढ्न सक्छ । प्रतिस्पर्धीहरूले अलि दुःख देलान् । काममा आशा देखाउनेहरूबाट धोका पाइने सम्भावना देखिन्छ । नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ ।
मानसम्मानमा बाधा पुग्नेछ । अरूको भरपर्दा प्रभावकारी काम नहुन सक्छ । विचारलाई तौलेर मात्र व्यक्त गर्नुहोला । बुद्धिको उपयोगले अरूलाई आफ्नो पक्षमा लिन सकिनेछ । विवेकले काम लिने प्रयत्न गर्नुहोला । आवश्यक पर्दा सहयोगीहरूको साथ पाइनेछ । मिहिनेत गर्दा बिस्तारै काम बन्न सक्छ । अवसर प्राप्त भए पनि दैनिकीमा परिवर्तन नआउन सक्छ । अरूको भरपर्दा प्रभावकारी काम नहुन सक्छ ।
अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि काम बन्नेछ । तर ठूलो फाइदा नदेखिएकाले लाभ उठाउन हतार नगर्नुहोला । अरूका लागि बुद्धि खर्चनु पर्नेछ । जीवनशैली व्यस्त रहे पनि कम महत्वका काममा समय दिनुपर्ला । चिताएका काममा बाधा पुग्नसक्छ । अवसर प्राप्त भए पनि आत्मविश्वासको कमीले पछि परिनेछ । स्वास्थ्यका लागि आराम र खानपानमा ध्यान पुराउनुहोला ।
व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । बेसुरमा काम गर्ने बानीले चुनौती निम्त्याउन सक्छ । अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ला । खर्च लागे पनि यात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । छर–छिमेकमा केही असमझदारी देखिए पनि टाढाका साथीभाइसँग सम्पर्क बढ्नेछ । आफन्तजनबाट भने टाढिनुपर्ला । पतिपत्नीबीच घरसल्लाह नमिल्न सक्छ ।
पहिले गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ । आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ । कृषि, पशुपालन तथा व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ । प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ । आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन् । चलअचल धनको उपयोगबाट मनग्गे फाइदा उठाउन सकिनेछ । मिहिनेत गर्दा दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ ।
सेवामूलक कामबाट उपलब्धि हातलागी हुनेछ । प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ । प्रतीक्षा गरिएको काम बन्न सक्छ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ । तर, परिस्थितिवश आफन्तबाट टाढिनुपर्ने हुन सक्छ । आफ्नो क्षेत्रमा अरूले प्रभाव जमाउन सक्छन् । विश्वासपात्रले धोका दिने हुँदा समयमै सजग रहनुपर्ला ।
धर्मकर्म तथा परोपकारमा प्रवृत्त भइएला । फाइदा सामान्य भए पनि तारिफयोग्य काम थालनी हुनेछ । चिताएको काम छिटै सम्पादन हुनेछ । सहयोगीहरूले हिम्मत दिलाउनेछन् । व्यापार–व्यवसाय विस्तार गर्ने समय छ । आफ्नो क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव जमाउन सकिनेछ । सामाजिक दायित्व बढ्नेछ । दिगो काम थाल्नुका साथै दाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ ।